Xirxirida CBD, Dhalada Dhalada ah, Dhalada 60ml E-dareere ah, Dhalada CBD Balm - ANKE
Dhalooyinka Unidorn Eliquid
Dib u buuxi (DIY) Dhalada Eliquid
Sanduuqa Iyo Tuulada Warqadda
ANKE xirxirida Co., Ltd.
Ku soo dhowow inaad noo soo dirto shuruudahaaga faahfaahsan. Markaas waan kuu soo celin karnaa dalabkaaga saxda ah iyo saldhigga faahfaahin faahfaahsan ee ku saabsan dalabkaaga…
Dhalada dhalada ah oo leh bambo dabool-xirmooyinka ANKE
Dhalada dhalada ah oo leh aluminium dabool-xirmooyinka ANKE
Ma haysaa CBD Balm / Cream oo leh midab khafiif ah? Miyaad tixgelinaysaa midabka dhalada ah ee ku habboon alaabada midabka leh ee CBD? Midabka kuulku waa ikhtiyaarka ugu fiican hadda. Waa semi-hufan, dadku way arki karaan alaabada gudaha. Iyo midabka ambaarku wuxuu ka dhigi karaa alaabada midabada leh inay si fiican u muuqdaan. Dadka ca ...
Habee Daabacaadda CBD Aluminium Shinni Caaga ah Bac-ANKE xirxirida
Shalay, waxaan soo bandhignay bacda waraaqda daabacan ee Solid CBD. Waxaan ku soo sheegnay in qaar ka mid ah farshaxanka fudud ee hemp iyo ubaxyada. Qalabkani waa ikhtiyaar fiican. Laakiin sidee loogu talagalay qaar ka mid ah farshaxanka midabada leh? Aluminium Shinny Caaga ah ayaa ka fiican. Waxaad ka hubin kartaa sawirka tixraac. The ...
Daabacaadda boorsada Kraft Paper ee xirmooyinka ANKE
Bacda waa xirxirida si ballaaran loo isticmaalo ee alaabada CBD. Seeds, ubaxyo, cuntooyin iyo alaabooyin kale oo adag, kuwan dhammaantood waxaa lagu buuxin karaa bacda. Boorsada waraaqda Kraft waa ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Waa kuwan faahfaahinta qalabkan: Bacda oo aan daabicin: Waxaan leenahay xoogaa cabir bac ah oo iib ah oo kayd ah markasta. Waxaad kartaa ...
Saliingaha loogu talagalay daawada buuxda ee CBD Oil
Noocyo badan oo CBD ah ayaa soo saarta saliida CBD ee heerka sare hadda. Ma leedahay qorshahan? Alaabtan fasalka sare ah wax badan ayaa lagu buuxiyaa xirxirida dhamaadka sare. Cirbadda Luer Lock waa xulashada ugu fiican. Sirinjeerkeennu wuxuu ka samaysan yahay muraayad buuxda, waa mid saaxiibtinimo iyo deegaan ahaanba leh. Maadadu waa darajo caafimaad. Waad xirxiran kartaa wax oi ah ...
Tube Paper for CBD Tincture Dhalo
Ku daabac Hemp daboolka CBD Jar-ANKE xirxirida
Illaa iyo hadda, waxaan ka hadalnay nooca kala duwan ee loo yaqaan 'CBD weel'. Waxaa jira daboolka baasaboorka, daboolka balaastigga ah iyo daboolka aluminium. Waxaan sidoo kale ka wada hadalnay midabka caadada u gaarka ah. Daboolka bamboo, waxaan sameyn karnaa bamboo madow, bamboo fudud. Iyo daboolka balaastigga ah, waxaan u beddeli karnaa midab kala duwan. Daboolka aluminium ayaa loo habeyn karaa t ...
Reday loogu talagalay HEMP & CBD EXPO
Hal maalin ka maqnaa bandhigga! Diyaar ma u tahay bandhigga？ Hadda waxaan kala sooceynaa qolkeenna waanan diyaarinaynaa alaab aad soo booqato. Dhammaan alaabooyinka waa la soo bandhigi doonaa: caag / dhalo CBD dhalo, caag / dhalooyinka dhalada leh daboolka, daboolka carruurta, daboolka aluminium, kiiska aluminium ...
Dhalada Jar-HEMP & CBD EXPO
Waxaa jira weel kala duwan marka loo eego dhowr maalmood ka hor maadada ceyriinka. Waxaan leenahay cabirro kala duwan oo weelkan ah. Daboolka weelku waa daboolka carruurta ka xannibaya, waa badbaado carruurta u badan. Sidoo kale waa isbedelka weyn ee suuqyada CBD. Midabbada waxay aqbalaan adeegga gaarka ah. Marabtaa inaad waxbadan kabarato weelka? Sugaya f ...
Fiilooyinka Pop-ka leh Kaabbo-HEMP & CBD EXPO
Caag Weel-HEMP & CBD EXPO
Waxaan ka hadalnay bac balaastig ah markii ugu dambeysay. Waa xirxiraan cunug oo loogu talagalay alaabada adag ee CBD. Waxaan haynaa xirxirid kale oo loogu talagalay sheyga adag-Dhalada Ilmaha-yar. Waxaan kuu haynaa 30ml, 50ml, 60ml, 80ml, 120ml, 160ml, 240ml weel aad dooratid. Waad ku xirxiran kartaa iniinyaha, ubaxyada ama waxyaabaha kale ee adag. C ...
Bacda carruurta-HEMP & CBD EXPO
Inta lagu guda jiro diyaarinta CBD EXPO, anaga ANKE xirxirashada (www.ankepacking.com) sidoo kale waxaan la xiriirnaa qaar ka mid ah soo saareyaasha CBD si aan wax uga ogaano waxa ay xirxirayaan ay isticmaalayaan, iyo waxa ay rabaan inay helaan. Intooda badani waxay noo sheegeen inay doorbidaan xirxirida carruurta. Waxay u noqon doontaa badbaado carruurta, tanina sidoo kale waxay noqon doontaa isbeddellada ...
10ml caag ah CBD Dhalo-HEMP & CBD EXPO
Dhalada CBD Dhalada-HEMP & CBD EXPO
Ma waxaad mashquul ku tahay diyaarinta HEMP & CBD EXPO. Maanta, waxaan dhammeynay sameynta liiska muunada. Ma rabtaa inaad ogaato waxa aan inta badan u diyaarinno EXPO-kan? Dhalada wareega ee Glass Glass. Waxaan diyaarinaa 10ml, 15ml, 30ml, 60ml, 100ml iyo 120ml dhalooyinka. Midabka, waxaan leenahay hufan, buluug, cagaar, cagaar, ...
Caaga Jar-HEMP iyo CBD Expo
Cinwaanka: Room No.2, Xiaogang mingzhu Beiheng Road, Degmada Baiyun, Guangzhou City, Shiinaha.